Idatha yeLattice, ethengwe yiApple ngezigidi ezingama-200 zeedola | Ndisuka mac
Ngokuqinisekileyo i-Lattice Data, njengenkampani, ayivakali iqhelekile kuninzi lwenu kwaye kufuneka nditsho ukuba ukuza kuthi ga ngoku nam andibazi ubukho bale nkampani. Kodwa kuyacaca ukuba oku akuthethi nto kwaye iApple iyayazi le nkampani, kakhulu kangangokuba ekugqibeleni wayithenga nge $ 200 yezigidi. Ngokuqinisekileyo eli li nani elibalulekileyo inkampani yobukrelekrele bokuzenzela abambalwa bayazi, kodwa kubonakala ngathi oku kungazisa ukuphucuka okuncinci kumncedisi wabafana baseCupertino, uSiri. Kule meko inokusebenza njengoko isixelela TechCrunch ukuhlela idatha ngaphandle kwayo nayiphi na imeko okanye ubudlelwane ukuphucula iwizard yesiginesha elinyiweyo.
Kuyinyani ukuba uSiri kufuneka aphucule kakhulu kwaye okoko kwafika iiMacs abasebenzisi abaninzi banqume ukugxeka ngaphezulu kokuzama ukusebenzisa umncedisi ukwenza eminye imisebenzi, kodwa asizukukhohliswa, uSiri usengumncedisi ofuna ukuphuculwa kwenkampani efana neApple kwaye ke ukuthengwa kwe Idatha yeLattice inokuzisa ukuphuculwa okumbalwa.
Ngolu kuthengwa, iApple iqinisekisa isisombululo kwenye yezona ngxaki zibalulekileyo zikaSiri, ukubanakho kokufumana umxholo kunye nokwakha idatha yomsebenzisi ngamnye. Ifemu esekwe nguChristopher Ré, uMichael Cafarella, uRaphael Hoffmann noFeng Niu kunyaka ophelileyo ka-2015, yenzelwe ukulungiselela olu lwazi lumelwe yidatha eveliswe ngumsebenzisi kwaye iya kuvumela zisebenzise ukuthanda umncedisi uSiri. Kude kube ngoku, olu lwazi kunye nedatha evelisiweyo ihlala ikude nokuba ingasetyenziswa.
Ngale nkqubo yolawulo iApple inokude yongeze izizathu zokuba isithethi sayo kunye nomncedisi siphucule ukhetho kunye nezinto ezinokubakho kuqokelelo lweenkcukacha nge HealthKit okanye ResearchKit. Ngokwenyani iya kusebenza ukusebenzisa yonke loo datha ukuxhasa umncedisi kwaye ngelishwa phucula umsebenzisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Idatha yeLattice, ethengwe yiApple nge- $ 200 yezigidi